भुकम्पको धक्का, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु – Sandesh Press
July 19, 2021 514
काठमाडौ । आइतवार राती भुकम्पको पराकम्पन महशुष गरिएको छ । आइतबार राती दैलेख केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो । राती ८ बजेर ५९ मिनेट जाँदा दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको सिँगौडी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ४.३ म्याग्नेच्यूडको भूकम्प गएको हो । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका सिस्मोलोजिष्ट तीर्थराज दाहालले आइतबार राती भूकम्प गएको बताएका छन् ।
यता भुकम्पको धक्का लाग्दै गर्दा काठमाडौंमा भने राजनीतिमा निकै ठूलो हलचल भएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले विश्वासको मत दिँदै गरेका थिए । सो क्रममा उनले मन्तब्य दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा राखेका कुरालाई सुझावको रुपमा लिने बताएका छन्।
संसद बैठकलाई दोस्रो पटक सम्बोधन गर्दै उनले एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले सम्बोधनका क्रममा राखेका कुराहरूलाई सुझावका रुपमा लिने बताएका हुन्।
‘प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको कुरालाई पनि मैले सुझावको रुपमा लिएको छु। यो भन्दा बढी आक्रमण गर्नुहोला भन्ने ठानेको त उहाँले गर्नु भएन यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘मैले यसलाई राम्रोसँग लिन्छु। किन भने सही सुझाव लिने त हाम्रो पार्टीको नीति हो। विरोधी पक्षलाई सम्मान गर्ने पार्टी हो। उहाँहरुको कुरालाई हामी सम्मान गर्नेनै छौं।’
Prevरौतहटमा अचम्म! कसरी अचानक भासियो शिवलिङ्ग जमिनमुनि? ​स्थानीय डराए
Nextसोमबार भगवान शिवको पूजा गर्नुहुन्छ ? जप्नुस् यी मन्त्र (पूजा विधिसहित)
यी ६ संकेत देखिए गराइहाल्नुहोस् उपचार, नत्र हुन्छ ब्रेन ट्युमरको जोखिम
ल सुन्नुस: म खसी/बोका होईन बिक्न, सन्तोष देउजाले भावुक हुदै सबैलाई जवाफ दिए।